Ekike mpaghara mpaghara Galician: akụkọ ihe mere eme na ihe mejupụtara ya. Akụkọ njem
Luis Martinez | 09/09/2021 11:00 | omenala, España
Anyị ghọtara otú Ekike mpaghara mpaghara Galician nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị mpaghara a na -eji mgbe niile n'oge gara aga. Ọ bụ eziokwu na nke a na -eji arụ ọrụ ụbọchị adịghị ka nke e ji eme ezumike. N'otu aka ahụ, enwere ndịiche dị n'etiti ógbè dị iche iche na ọbụna kansụl Galicia.
Agbanyeghị, uwe mpaghara Galicia nwere, kemgbe oge ochie, nwere ịdị n'otu karịa nke obodo ndị Spain ndị ọzọ. Ma ndị nwoke ma ndị nwanyị na -abụ otu uwe mgbe niile, n'agbanyeghị na enwere ngwakọta na ndo dị iche iche. Mana, ọbụlagodi na nke ikpeazụ, nke a austerity na obere agba dị iche iche nke ha niile. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere uwe mpaghara mpaghara Galician, anyị na -akpọ gị òkù ka ị gaa n'ihu na -agụ akwụkwọ.
1 Obere akụkọ nke uwe mpaghara Galician
2 Ekike mpaghara mpaghara Galician maka ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke
2.1 Ejiji Galician a na -ahụkarị maka ụmụ nwanyị
2.2 Uwe a na -ahụkarị nke Galician maka ụmụ nwoke
3 Kedu mgbe eji akwa mpaghara Galician?
Obere akụkọ nke uwe mpaghara Galician
Otu egwu na -eyi uwe mpaghara mpaghara Galician
O siri ike ikwu maka mmalite nke ụdị ejiji Galicia (ebe a anyị na -ahapụrụ gị akụkọ gbasara ebe mara mma na mpaghara a). Ma ha alaghachi azụ ọtụtụ narị afọ. Ndị bi n'ime ime obodo jikọtara uwe ndị nna nna ha ma nyefee ya ụmụ ha.
N'ezie, ịmụ banyere uwe a amaliteghị n'etiti etiti narị afọ nke XNUMX, mgbe Ihunanya ọ kpaliri mmasị na omenala obodo nke obodo. Ihe si na nke a pụta bụ Ndi otu ndi Galician, nke ndị ọgụgụ isi kere dịka Emilia Pardo Bazán o Manuel Murguia ime ka omenala na omenala ndị Galician dịghachi ndụ.
Otu n'ime mmemme ya bụ ntọala ọgbakọ ukwe mpaghara nke chọrọ ka ha yie akwa. Ọ bụ mgbe ahụ ka agbalịrị iweghachite uwe mpaghara Galician. N'oge ahụ, ejirila ọgbara ọhụrụ nke akwa dị iche iche ejiri mkpali nke ya dochie ya Mgbanwe Mmegharị. Ya mere ọ dị mkpa iji nyocha.
Achọpụtara na ụdị ejiji Galicia bidoro, opekata mpe, ruo XVII narị afọ, dị ka ọ pụtara n'akwụkwọ dị iche iche. N'ime ndị a, akwụkwọ ndekọ aha ebe edepụtara ego agbamakwụkwọ na ihe nketa. A hụkwara na, n'oge ndị ahụ, ha bụ ndị petrucios ma ọ bụ okenye nke ebe ahụ gosipụtara akara na yana, na uwe, ọnọdụ nke ndị yi ya ka egosiri. Dịka ọmụmaatụ, enwere ihe mkpuchi maka arịrịọ, uwe mwụda maka ndị lụrụ di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ ndị na -alụbeghị di, yana dengue maka ịnọghị.
N'aka nke ọzọ, e ji akwa ajị anụ ma ọ bụ akwa linen wee nweta uwe mpaghara ahụ nke nwetara aha dị iche iche dabere na nrụpụta ma ọ bụ mmalite ya. N'ihi ya, picote, estameña, oriọna, nazcote, ike, akwa ma ọ bụ baeta.
Dịka anyị gwara gị, e mere ka akwa ndị a niile dị mfe site na Mgbanwe Mmegharị yana n'oge a ka ewebata mmetụta nke obodo n'ime uwe ahụ. N'otu aka ahụ, nkọwa ọrụ aka nyere ohere maka ebe a na -akwa akwa, yana ihe a niile, enwere nhazi ọkwa nke ejiji mpaghara Galician nke ka dị ruo taa.
Ekike mpaghara mpaghara Galician maka ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke
Ozugbo anyị mechara ntakịrị akụkọ ihe mere eme, anyị ga -agwa gị gbasara uwe ndị mejupụtara ụdị ejiji Galician maka ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke. Anyị ga -ahụ ha iche, mana ọ bụ ihe na -atọ ụtọ ịmara na ụfọdụ na -adịkarị maka ma nwoke ma nwanyị.
Ejiji Galician a na -ahụkarị maka ụmụ nwanyị
Ejiji mpaghara mpaghara Galician maka ụmụ nwanyị
Ihe ndị dị mkpa nke uwe ndị Galician omenala maka ụmụ nwanyị bụ uwe mwụda na -acha ọbara ọbara ma ọ bụ nke ojii, apron, ahụ ọkụ dengue na mkpuchi isi. Banyere nke mbụ, a na -akpọkwa m ma ọ bụ basquiñaỌ dị ogologo, n'agbanyeghị na ọ dịghị mkpa imetụ ala na, na mgbakwunye, ọ ga -atụgharị otu na ọkara n'úkwù.
N'aka nke ya, a na -eke ihe mkpuchi ahụ n'úkwù n'elu uwe mwụda. N'ihe gbasara aka ma ọ bụ pano. Na mgbakwunye, ọ nwere ike ịbụ nke ọtụtụ agba na, mgbe ụfọdụ, a na -etinye okpu ahịhịa ma ọ bụ okpu, nke bụ otu, mana pere mpe.
Dengue kwesịrị ka a kpọtụ aha ya iche, ebe ọ bụ otu n'ime uwe ndị ama ama nke uwe mpaghara Galician. Ọ bụ iberibe ákwà a na -etinye na azụ nke a na -esi na igbe ya gafere obi ya ịlaghachi wee kee ọzọ na azụ. A na -ejikarị velvet na rhinestones chọọ ya mma. N'okpuru ahụ ọkụ dengue, ọ na -enweta Uwe ọcha na olu na -emechi emechi, uwe mpako na ihe ịchọ mma.
Akpụkpọ ụkwụ, akpọrọ ọka o ndị na -ese ihe A na -eji akpụkpọ anụ eme ha ma nwee nkwọ ụkwụ. Ha na ha, a na -emecha akwa uwe ndị Galician na -eyikarị maka ụmụ nwanyị. Agbanyeghị, enwere ike ịgbakwunye ihe ndị ọzọ.
Ọ bụ ikpe nke debe ya, nke bụ apron ka ibu; nke refaixo, nke a na -etinyekwa ya n'akpa uwe na popolos, ụdị uwe ime ogologo nke ruru ikpere wee mechie lace. Enwere ike ikwu otu ihe ahụ shawl, ihe mkpuchi aka nwere isi asatọ, nke sooks ma ọ bụ mgbasa ozi, nke okpukpu abua na nke jaket. N'ikpeazụ, ọ nwetara aha nke awo setịpụrụ ihe ịchọ mma a na -akwụkwasị n'obi ya na nke mechiri nkọwa uwe ahụ.
Uwe a na -ahụkarị nke Galician maka ụmụ nwoke
Ndị ọkwọ ụgbọ mmiri yi uwe mpaghara Galician maka ụmụ nwoke
N'aka nke ya, uwe ndị Galicị na -ahụkarị maka ụmụ nwoke mejupụtara black leggings, jaket, vest na okpu. Nke mbụ bụ ụdị uwe ogologo ọkpa na -eru ikpere. Mgbe ụfọdụ a na -akwado ha leggingsỌzọkwa ụfọdụ leggings, mana nke ahụ na -aga site na akụkụ ikpeazụ nke ahụ ruo akpụkpọ ụkwụ. Nke ikpeazụ pụtara na narị afọ nke XNUMX iji dochie sọks, n'agbanyeghị na a ka na -ejikwa ya.
N'okpuru uwe ogologo ọkpa, ị nwekwara ike iyi akwa cirola. Ọ bụ uwe ime ime ọcha nke na -esi n'okpuru ya na -esi na ya esi mapụ ma ọ bụ na -etinye n'ime eriri ga -ejikọ rịbọn n'ụkwụ ya.
Banyere jaket ahụ, ọ na -eyi obere ma dabara ya. Ọ na -egosipụtakwa aka uwe wara wara na akpa abụọ kwụ ọtọ. N'okpuru ya, a camisa na n'elu nke vest. Ọzọkwa, n'úkwù na -aga ezi ma ọ bụ eriri, nke na -aga gburugburu ugboro abụọ, nwere tassels ma nwee ike nwee agba dị iche iche.
N'ikpeazụ, montera o monteira Ọ bụ okpu a na -ahụkarị maka uwe mpaghara mpaghara Galician maka ụmụ nwoke. N'ime imewe ya, ọ dabara na aha ndị Asturian ya na mmalite ya malitere na emepechabeghị emepe. Onye Galician buru ibu na akụkụ atọ, n'agbanyeghị na enwerekwa ihe mkpuchi ntị maka ụbọchị oyi.
N'otu aka ahụ, montera na -eyi tassel na, dị ka ọchịchọ ịmata, anyị ga -agwa gị na, ọ bụrụ na ha gaa n'aka nri, onye nwe ya alụghị nwanyị, ebe, ọ bụrụ na ha apụta n'aka ekpe, ọ lụrụ nwanyị. Ka oge na -aga, ọ kwụsịrị chapeus ma ọ bụ okpu, emebere mmetụta, nke ụdị beret dị na mpaghara Vigo (lee ebe ị nwere akụkọ gbasara obodo a).
N'aka nke ọzọ, ọ bụ ezie na ọ kwụsịlarị iji ya eme ihe, enwere ihe ọzọ na -achọsi ike nke ukwuu n'ụdị uwe Galician. Anyị na -ekwu okwu coroza.
Kedu mgbe eji akwa mpaghara Galician?
Mmemme Arde Lucus
Ozugbo ị matara ụdị uwe ndị Galicia, ị ga -enwekwa mmasị ịmata mgbe ejiri ya. N'ụzọ ezi uche dị na ya, na mmemme nke obodo Galicia niile enwere ndị mmadụ yi uwe ndị a.
Dị ka ọ na -adịkarị, ha bụ akụkụ nke egwu egwu ọdịnala nke ndị otu ya bụ ndị egwu ikuku na -akụ ụda. Maka ezinụlọ mbụ nke ngwa, ndị ntụgharị okwu nke Akpa akpa Galician, ọbụlagodi na ha na -arụ ọrụ naanị ha.
Ngwa a bụ omenala miri emi nke ala ahụ, ruo na ọ bụ otu n'ime akara ya. Maka nke a, enweghị ike ịghọta piper na -enweghị ụdị ejiji Galicia. Ọ bụ eziokwu na akpa akpa bụkwa akụkụ bụ isi nke akụkọ ọdịnala Asturian na ọbụna mpaghara Bierzo na Sanabria, mana onye Galician nwere ụfọdụ ọdịiche.
N'ọnọdụ ọ bụla, ndị na -akpa akpa na ndị na -akụ akụ na ndị na -agba egwu na -eyikarị uwe mpaghara mpaghara Galician. Ha nọkwa n'ememe ndị bụ isi nke ala ha. Dịka ọmụmaatụ, ha anaghị akọ mmemme nke Apostle Santiago, ọ bụghị naanị onye nlekọta Galicia, kamakwa nke Spain niile.
N'otu aka ahụ, ha na -aga n'okporo ụzọ Lugo n'oge Ememme San Froilán ma pụta na mmemme Ista dịka nke Lọ akwụkwọ ọta akara y Ferrol, ha niile kwupụtara mmasị ndị njem. Ị nwedịrị ike ịhụ ndị ntụgharị okwu a ka ha yi uwe ndị Galician na -eme ememme ndị metụtara okpukpe.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ihe a na -ahụkarị ebe ndị ọkpọ na -abanye Lucus na-ere ọkụ, ebe ndị Lugo na -echeta oge ndị Rom ha gara aga; na Feira Franca nke Pontevedra, dabere na mgbe ochie obodo, ma ọ bụ na Njem njem nke Catoira Viking, nke na -echeta mbata ndị agha Norman bịara n'obodo ahụ.
Njem njem nke Catoira Viking
N'ikpeazụ, ọnụọgụ ndị mmadụ yi uwe mpaghara Galician na mmemme gastronomic buru oke ibu. N'ime afọ niile enwere ọtụtụ na mpaghara niile. Mana anyị ga -egosi gị ama ama Ememme nri mmiri nke a na -eme n'obodo O Grove kwa Ọktọba, na Octopus, nke na -eme na Carballino na Sọnde nke abụọ n'ọnwa Ọgọst. Agbanyeghị, oriri nke cephalopod a gbanyesiri mkpọrọgwụ ike na Galicia nke na, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara niile na -eme ememme gastronomic dabere na ya yana ụmụ amaala ya yi uwe ejiji.
Na mmechi, anyị enyochala gị Ekike mpaghara mpaghara Galician maka ma nwoke ma nwanyi. Anyị agabigala akụkọ ihe mere eme ya na ihe ọdịnala ya iji gosi gị ebe ị nwere ike ịhụ ya ọtụtụ oge. Ugbu a naanị ị ga -aga Galicia wee nwee ekele maka ya na ndụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Ekike mpaghara mpaghara Galician